Kungani amathuba inyuka isehlukaniso lapho ngeholide ngokuhlanganyela?
amaholide Umkhaya kungaba isikhathi esicindezela kakhulu, ucabangela ukuthi singakanani isikhathi ongasichitha ku search for ehhotela ezinhle futhi izindiza. Ngeshwa, izibalo futhi uyavuma ukuthi lobo baphumule kunethonya Kusolakala ingcindezi kakhulu ngobuhlobo. Ucwaningo lwamuva wabonisa ukuthi ukwanda inani labantu abahlukanisayo kuyinto eduze ahlobene namaholide ezithile zonyaka.
Ngokuvamile, ungabona eliphakeme lezehlukaniso izinkomba kusukela ngo-March kuya Agasti. Lokhu kwaholela abacwaningi basikisela ukuthi isimo kungase kube umphumela ngamalanga wamaholideyi wehlobo. Ngalesi sikhathi, imibhangqwana eminingi izama ukulungisa ubuhlobo babo, uya eholidini ndawonye. Abacwaningi waphawula ukuthi isidingo izinyanga ezimbili kuya kwezintathu ukuze uthole ummeli ukuze uthumele amadokhumenti, ukuhlela izimali, futhi ngisho nje ukunquma kuso.
Empeleni, ukutadisha ososayensi zaseMelika zaqala neqiniso lokuthi bafuna zembula indlela esibucayi kuthinta izinga yesehlukaniso. Noma kunjalo, aqala ukuqaphela ukuthi imodeli abahlukanisayo seasonality iqhubeka kungakhathaliseki awenzayo nanoma iziphi izici, okuyinto bahlolisisa, isibonelo, izinga lokuntuleka kwemisebenzi kanye zokudayiswa kwezindlu. Lezi idatha okuphindaphindiwe unyaka nonyaka, hhayi kuphela e-America, lapho ucwaningo lwenziwe, kodwa futhi kwamanye amazwe emhlabeni.
Abacwaningi ihlaziye idatha ye-Ohio, Minnesota, Florida futhi Arizona, futhi wathola ncamashi lo mkhuba. Ngaphezu kwalokho, kulezi zifunda, Amathrendi avele acute ngaphezulu, njengoba e-Ohio Izinga labangasebenzi bekulokhu ngenhla avareji kusukela komnotho, njengoba Florida futhi Arizona ngiye ngahlushwa ngokuwa emakethe ingcebo.
Kungani kukhona simo?
Ukuzama ukuchaza lokhu mkhuba, umsunguli walokhu kucwaninga, phambili, uProfesa Julie Brines, wathi, njengoba umthetho, ngamaholidi kanye ngamaholide umndeni ezikhulayo okulindele elihlobene ne nobuhlobo babo, ngisho noma esikhathini Eminyakeni edlule, aseke wabhekana kaningi nokudumazeka.
Iholide - lokhu isikhathi sonyaka, okuyinto bayahlonishwa nethuba isiqalo esisha. Ngakho, ubonakala njengomuntu ukuthi ukwedlulela kuleso sigaba isigaba esisha ubudlelwane. Ngandlela-thile kunjani umjikelezo nethemba. Lokhu ngokomfanekiso icala izikhathi imibhangqwana.
Ngeshwa, uma lezi zikhathi bengenzi lokho abakulindele noma asize ukulungisa izinkinga emshadweni, umbhangqwana uqale amacala ezehlukaniso.
Esikhathini iholidi ukuthi asolwe?
Yiqiniso, izizathu nesehlukaniso enezici futhi eziyinkimbinkimbi, njengoba zonke ubuhlobo uhlukile. Lolu cwaningo awusikiseli ukuthi ngamaholide kanye iholidi kwaba isizathu kwesehlukaniso, kunalokho, babonisa izinkinga zamanje. Ngakho-ke, zihlotshaniswa waba ukwanda okukhulu kwezincwadi inani labantu abahlukanisayo kusukela ngo-March kuya Agasti.
Isehlukaniso lapho umkakhe okhulelwe: ezicashile inqubo
Isehlukaniso - Yini lokhu? Izizathu, izisusa kanye nemiphumela yesehlukaniso
Kungani abe nesizungu kuhle empilweni: 5 Izizathu
Kanjani ukuqala ukuphila okusha ngemva kokwehlukana
Kanjani ukuba ubalekele umyeni wakhe
Kanjani ukubuyela khona umuntu esimthandako? izindlela eziningana
Konke "Harry Potter", ukuze: uhlu kanye nencazelo emfushane
Umlingisi Alexander Rezalin: Biography, ukuphila siqu. izindima eqaphelekayo
Smartphone Highscreen WinJoy: izici, indawo, ukubuyekezwa
Ezomnotho Azerbaijan: netimphawu
Kalithea Sun & Sky 3 * (Greece / Rhodes) - izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa
Ischenko evgeniy Petrovich: izithombe, biography, umndeni, unkosikazi
Stroller ngoba izinja - sokunethezeka noma ingabe njengento edingekayo?
L'Oreal Blush - bonke izikhathi
Ukhilimu kangcono izinwele ukususwa endaweni bikini
Ufuna ukwazi ukuthi kufanele uwubeke imibala yasekwindla?
Ucwaningo lwesayensi yezinyosi? Igama mayelana namahhashi
Maria Morgun - enhle kunazo TV umethuli